बुनपा–१२ लाई नमुना वडा बनाएर देखाउछुः उम्मेदवार भट्टराई (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २८ गते २३:५० मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका नेकपा एमाले वडा नं. १२ का अध्यक्ष उम्मेदवार शम्भु भट्टराईसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
वडावासीहरुको पहुँचमा पुग्नका लागि आफ्ना गतिविधिहरुलाई कसरी अगाडी सार्दै हुनुहुन्छ ?
म विगत देखि नै सामाजिक कामहरु गर्दै आएको छु । पृष्ठभुमि नै भन्नु पर्दा लामो समय देखि टोल सुधार समितिमा रहेर लगभग १० वर्षको अनुभव, टोलवासी सबैमा काम गरेको अनुभवले टोलमा जादा मलाई एक पटक तपाईले मलाई टाइम दिनुहोस म तपाईलाई ५ वर्षसम्म मैले काम गर्नेछु । भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर उहाँहरुलाई गराएको छु । त्यसको साथ–साथै म वडामा बस्दा तपाईको काम के हो ?, आज त तपाई हिड्नु हुन्छ तर भोली त तपाईले म गर्दिन भन्नुहुन्छ । भोली हामीलाई चिन्दिन भन्नुहोला ? यस्ता धेरै प्रतिक्रिया आउँदा रहेछन् टोलमा हिड्दा । त्यो हुँदैन । यहाहरुले निश्चिन्त भएर बस्नुहोस भन्ने गरेको छु । म यो विषयमा हिजो ढलको, बाटोको, पानिको समस्याहरु आज यावत समस्याहरु छन । मुख्य विकराज खानेपानिको समस्या देखे मैले । देख्दा खेरी कसरी समस्या समाधान गर्नुहुन्छ ? भन्नुहुन्छ । म यो समस्याको समाधान बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको बृहत विकासका लागि हाम्रो टिम जिताई दिनुहोस तपाईहरुले । हामी ५ जना वडा अध्यक्ष, सदस्य मात्र हैन यो मेयर, उपमेयर सहितको टिम जिताउँनु होस । यो ५ वर्षमा प्रतिवद्धतामा घोषणा गरेका कामहरु तपाईहरुलाई मैल गर्ने कामहरुमा १ वर्षमा परिवर्तन देख्नु हुनेछ ।
वडावासीहरुसंग कार्यकर्ता, साथी–भाईहरुसंगसंगै पुगिरहेको छु । मलाई २ वर्ष अगाडी वडा नागरिक मञ्चको जिम्वेवारी दिएको थियो । त्यत्ति बेला देखि टोलमा केहि समस्याहरु देखेको छु । अहिले पनि टोलमा जाँदा तपाईलाई हामी चिन्छौ भन्नुहुन्छ तर काम गर्ने विषयमा कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्नुहुन्छ । मैले भन्ने गरेको छु, यो स्थानिय निकायको चुनाब २० वर्ष पछि हुन लागेको हो । अबको स्थानिय सरकार भनेको सिंहदरवारको अधिकार वडामा हो । यो अधिकारका लागि तपाईहरुले एक पटक हेर्नुहोस मात्र, म राम्रो छु । हाम्रो प्रतिपर्धिहरु साथीहरुलाई पनि समेटेर लैजाने छु ।
हिजोका दिनहरुमा वडावासीहरुलाई के दिनुभयो ?
यो वडावासीले बुझ्ने कुरा हो । म शम्भु भट्टराई राम्रो छु भन्दिन वडावासीहरुले मलाई चिन्नु भएको छ । मैले चिनाउँनु पर्दैन । म कपनमा बसेको २५ वर्ष भयोे । उहाँहरुले यो काम गर्ने मान्छे हो, समाज सेवा गर्ने मान्छे हो भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका नेकपा एमाले वडा नं. १२ अध्यक्ष उम्मेदवार शम्भु भट्टराईसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः